Aqalka Sare oo abaalmarin guddoonsiiyay danjiraha Turkiga ee Soomaaliya – Kalfadhi
Aqalka Sare oo abaalmarin guddoonsiiyay danjiraha Turkiga ee Soomaaliya
Golaha Aqalka Sare ayaa xaflad sagootin ah u sameeyay safiirkii muddo 4 sano ah Dowladda Turkiga u fadhiyey Soomaaliya, Oglan Bekar. Xafladda sagootinta ahayd oo uu sooqaban-qaabiyey Golaha Aqalka Sare waxaa ka soo qayb galay Xildhibaanada labada Aqalka ee Baarlamaanka iyo Xubno ka tirsan Golaha Wasiirada, Siyaasiyiin, Culuma’udiin iyo marti sharadf kale.
Xafladda, oo ay hadalada ay ka jeediyeen qaar ka tirsan madaxdii lagu casuumay iyo Guddoonka Golaha, waxaa lagu dheeraday doorka wax qabad ee uu dalka Turkigu ka geystay Soomaaliya, gaar ahaan gurmadkii gargaar ee ay u fidiyeen Soomaaliya, markii ay dhacaysay abaartii 2011-kii.
Guddoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sifo fiican dul saaray Saaxiibtinimada Tuurkiga iyo xiriirka labada dal xiliga uu soo bilowday. ”Qarnigii 16-aad inaga iyo boqortooyadii xabashida dagaalbaa na dhexmaray. Xiligaas labadii dowladood ee ugu xooganaa waxay ahaayeen Turkiga iyo Burtaqiiska. Turkiga inaga ayuu ina taageeray, Burtaqiiskuna wuxuu taageerayay boqortooyadii Xabashida, sidaasdaraadeed, Turkiya hadda kaliya saaxiib iyo walaal noma ahan ee xitaa qarnigii 16-aad ayuu ahaa” ayuu yiri Guddoomiye Cabdi Xaashi.
Cabdi Xaashi waxa uu, sidoo kale, ku amaanay Turkiga doorkii ay ka qaateen gurmadka abaartii Soomaaliya ku dhufatay 2011-kii, taas oo ahayd kaalmo weyn, oo waqtigeedii ay Soomaaliya u baahneed, kaalinna ka qaaday wax-ka-qabashadii abaartaas. ”Oglan Bakar waa safiir aqoonyahan karti leh, oo madaale ah, kaalin waynna ka qaatay adkaynta xiriirka soojireenka ah ee Soomaaliya iyo Turkiga, isla markaana si hagar la’aan ah ugu adeegay shacabka labada dowladood, isagoo mar walba ku dhaqaaqayey dareen furfurnaan, soodhowayn iyo howl karnimo ah, waxaana anigoo ku hadlaya magaca Golaha iyo kan Shacabka Soomaaliyeed uga mahadcelinayaa howlihii uu inoo qabtay iyo isku xirkii labada shacab iyo kaalintii uu ku lahaa” ayuu Guddoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi, yiri.
Safirkii Dalka Turkiga Oglan Bekar ayaa, mahadcelin kasokow Xafladii Sagootinta ahayd, waxa uu ka yiri ”Taariikhda Turkiya iyo Soomaaliya waa sax, waxa ay adaysaa qarniyaalo badan, laakiin xiriirka dhabta ah waxa uu bilowday sanado ka hor. Waxaan weli joognaa xaalad bilow ah, laakiin xiliyada nagu soo wajahan waxaa jira talaabooyin badan oo la qaadi doono” ayuu yiri Amsadoor Oglan Beker.
Sidoo kale, safiirka ayaa sheegay inuu saddex sano oo ka horeysay inaatano ka shaqo bilaanin safaaradda ay ku leeyihiin Muqdisho, oo uu joogay 4 sano, uu xitaa horay uga tirsanaa Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalkiisa, isagoo, sida uu sheegay, si gaara ula socday xaaladda Soomaaliya, taasoo uu tilmaamay in ay micno gaar ah u sameeneyso iney Soomaaliya noloshiisa ku jirtay 7-dii sano ee ugu dambeysay cimrigiisa.
Gabagabadii Xafladdaas sagootinta ahayd ayey Dowladda Soomaaliya haddiyado ku guddoonsiisay safiirka iyo marwadiisa, iyadoo haddiyadaha ay guddoomeyn ay ka mid yihiin qaar loogu talogalay Madaxwaynaha Dalka Turkiga, Recep Tayyip Erdoğan.
Xildhibaan Fiqi: Baarlamaanku ha baaro weerarkii hotel Saxafi
Golaha Shacabka Oo Maanta La Hor Geynayo Miisaaniyadda 2019-ka